I-Liverpool nethuba lokunqoba isicoco seligi | Scrolla Izindaba
UGerrard manje usengumphathi we-Aston Villa ovelele weqembu njengoba efinyelele kuleli zinga.
Njengoba i-Villa izovakashela i-Manchester City ngeSonto elizayo abalandeli be-Liverpool bazothemba ukuthi iqhawe labo lingawaphuca amaphuzu izimbangi zabo nesicoco.
Ngemuva kokuthi iqembu likaPep Guardiola likwazile ukudlala ngokulingana ne-West Ham United namuhla igebe esicongweni lisasele ngamaphuzu amane njengoba abafana bakaJürgen Klopp besazobhekana ne-Southampton kude nasekhaya ngoLwesibili.
I-City ishaywe ngamagoli amabili eqandeni kanti ibibheke ukuvulela i-Liverpool umnyango wokuvala igebe. Nokho ngemuva komdlalo esiwombeni sesibili abaholi beligi bakwazile ukuqeda ngokulingana.
Bekungaba ukunqoba okulula ngesikhathi i-City ithola iphenalthi kodwa uRiyad Mahrez wase-Algeria ubone iphenalthi yakhe ivinjwa njengoba umdlalo ubusuya ngasemaphethelweni.
Uma i-Liverpool ingawunqoba lowo mdlalo amathemba abo aphindwe kane azofika osukwini lokugcina futhi nama-Reds asefomini enhle kulandela ukunqoba kwawo indebe ye-FA ngomgqibelo ebusuku obungeke ubheje ngokumelene nayo ukuze udlule kuma-Saints and Wolves.
UGerrard ukubeke kwacaca ukuthi i-Villa isazodlala ngokuzimisela yize ikhululekile. Uthe ngoLwesibili ngemuva kokuhlulwa kwabo i-Liverpool akusho ukuthi ufuna ama-Reds awine isicoco.
“Akulula ukufika esigabeni sesizini lapho kunengcindezi enkulu futhi kunokushisa okukhulu kuwo womabili amaqembu.
Ngeke kungimangaze uma sekukhona ukuguquka kwezinto,” kusho uGerrard.
“I-Liverpool iyayazi inselelo yingakho kufanele ihloniphe ukuthi inabadlali abasezingeni kanye nomphathi ophezulu.
Kuyangijabulisa kakhulu ukubona ukuthi idlala kanjani futhi ngicabanga ukuthi kuyazibonakalela ukuthi ngibafundisa ukudlala noma ingayiphi indlela.”
UGerrard uzuze izindebe eziningi ezinkulu ne-Liverpool kodwa wehluleka ukuwina i-Premier League neqembu ngaphezu kokusondela kaningi.
Ukuvimbela ukunqoba kwe-City nokuvumela i-Liverpool ukuthi iwine iligi kuzokwenza uGerrard azizwe njengomnqobi we-Premier League.
I-City isengaba ngompetha ngoLwesibili uma i-Liverpool yehluleka ukuthola amaphuzu amathathu ibhekene ne-Southampton.
Umthombo wesithombe: @ThisIsAnfield